प्रियंका कार्कीः आइटम गर्ल कि अभिनेत्री ? – An Online Entertainment News Portal
HomeGalleryCelebrityप्रियंका कार्कीः आइटम गर्ल कि अभिनेत्री ?
November 7, 2018 Tulasa Karki Celebrity, Entertainment, Feature News, Gossip, Kollywood, News 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट – कलाकार भैसकेपछि सबै खालको भूमिका गर्नपर्छ भन्ने पनि छन् । कतिपय कलाकार भैसकेपछि चुजी हुनुपर्छ पनि भन्छन् । कलाकार भैसकेपछि यो र त्यो गर्दिन भन्न हुँदैन भन्ने पनि हुन्छन् । तर, कलाकार भैसकेपछि आफूले कुन बाटो समात्ने भन्ने चै छुट्याउनपर्छ । होइन भने सबैतिर हात हाल्न खोज्दा यता त उताको भइन्छ ।
हिरोइन भैरहेको कलाकार आमाको भूमिकामा देखिदा दर्शकले अन्य सिनेमामा पनि आमा नै देख्न सक्छन् । यसैले समय अनुसार सिनेमा खेल्न आवश्यक छ ।
अभिनेत्री प्रियंका कार्कीले आफूलाई समय अनुसार ढाल्न नसकेको देखिन्छ । किनकी, फिल्ममा आएपछि उनले गुणस्तर भन्दा पनि संख्यालाई बढी ध्यान दिइन् ।
सिनेमामा भूमिका के छ भन्दा पनि अफर आएपछि सक्कियो । यसैले प्रियंकाको पहिचान फेसन बाहेक अरुमा बन्नै सकेन । फेसनमा उनी अघि छिन्, तर अभिनय र भूमिकामा सधै पछि ।
एउटा सिनेमा रिलिज हुने बेलामा अर्को सिनेमाको छायांकनमा रमाउने अभिनेत्री कार्कीलाई काम गर्न पाए पुग्छ । उनको छवि अहिले बदलिन थालेको छ । सिनेमामा सानो भूमिकाको कुरा छाडौ, अहिले उनी आइटम गीतमा बढी रमाउँछिन् । हिरो को छ, आइटम कोसँग नाच्ने भन्ने नै भएन ।
अफर आयो कि नाचिहाल्ने । व्यस्त रहन आवश्यक छ । तर, व्यस्तताको नाममा हरेक कुरामा हात हाल्दा कलाकार सस्ता हुन्छन् । प्रियंका छोटो समयमा नै सस्तो हुनुको कारण पनि यही नै हो ।
उनले अभिनय गरेका फिल्म र तीनको गीत यति चाडो आइदिन्छन् कि, उनलाई लिएर दर्शकमा कुनै प्रकारको कौतुहलता नै रहन छाडेको छ । उनले नृत्य गरेका आइटम गीतको प्रतिक्रिया हेर्दा पनि धेरैले उनलाई चाडो चाडो आएर सस्तो बनेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
हुनत, प्रियंकाले सोच्नुपर्ने बेला घर्किएको छ । यसैले पनि उनी अहिले काम आएका सबै गरौ र बसौ भन्ने मनिस्थितीमा देखिन्छिन् । तर, एउटा चलेकी अभिनेत्रीका लागि यो शोभनिय हुँदैन । उनले पनि यो कुरामा ध्यान नदिए, अरु कसले ध्यान दिन्छ र खै ।